आइतबार, ०२ कार्तिक, २०७७ ४प्रतिक्रिया
विराटनगर, २ कात्तिक । ‘ओ’ ब्लड ग्रुप भएका मानिस कोभिड १९ को अगाडि कम संवेदनशील हुने र गम्भीर बिरामी पर्ने सम्भावना पनि कम हुने देखिएको छ ।
संक्रमणको जोखिम र गम्भीर बिरामी पर्न सक्ने सम्भावनामा ब्लड ग्रुपको भूमिका रहन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । डेनिसमा भएको अध्ययनका अनुसार कोभिड पोजेटिभ भएका ७ हजार बढी मानिसमध्ये ३८.४ प्रतिशतको ब्लड ग्रुप ओ रहेको थियो । तर, टेस्ट नगरेका २२ लाख मानिसको ४१ प्रतिशतमा ब्लड ग्रुप ओ रहेको छ ।
तिनै ७ हजार संक्रमितमा ब्लड ग्रुप ए भएका ४४.४ प्रतिशत संक्रमित थिए, जबकि डेनिसमा ४२.३ प्रतिशतमा ए ब्लड ग्रुप छ । त्यस्तै, क्याडनाका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अर्को अध्ययनमा कोरोनाले गम्भीर बिरामी परेका ९५ बिरामीमा ८४ प्रतिशतको ब्लड ग्रुप ए या एबी रहेको पत्ता लागेको थियो । साथै, ए वा एबी ब्लड भएकालाई तुलनात्मक रुपमा आईसीयूमा लामो समय राख्नुपरेको थियो ।
कोभिड–१९ मा शरीरभित्र रगत जम्नाले नै संक्रमित गम्भीर बिरामी पर्ने गरेका छन् । तर, ब्लड ग्रुप ओ भएकामा रगत जम्ने तत्व कम हुनाले यस्तो भएको हुन सक्ने बताइएको छ । साथै, संक्रमणविरुद्ध लड्ने एन्टिबडिज या प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा रिसेप्टरको उत्पादनमा फरक पार्ने अन्य ब्लड ग्रुपको एन्टिजेनको प्रभाव पनि हुन सक्ने बताइएको छ ।
युनिभर्सिटी अफ साउदर्न डेनमार्कका क्लिनिकल प्रोफेसर तथा डेनिस अध्ययनका प्रमुख डाक्टर टोर्बेन बेरिङटनले ब्लड ग्रुपले मानिसको दैनिकीमा एकदमै थोरै प्रभाव पारिरहेको हुँदा अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकको बताएका छन् । विज्ञका अनुसार यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
पछिल्ला केही अध्ययनमा पनि ब्लड ग्रुप ओ हुने मानिसमा संक्रमणको जोखिम कम हुने र ब्लड ग्रुप ए भएका मानिस संक्रमित हुने बढी जोखिममा रहेको देखाएको थियो ।
भीम बहादुर खड्का बिराटनगर says:
मलाईं बिलकुल सही लागेको छ। किन कि कुनै पनि ठाउँमा अध्यन गर्दा यस्तै रिपोर्ट बढी पाईएको छ।
के यो तथ्य साँचो हो त ?? म पनि ओ ब्लड मा पर्छु के हुदो रहेछ हेरौ!!!!!
तो सबै अहिले सम्पूर्ण अध्ययन होइन, प्रारम्भिक अध्ययन मात्र हो।यसमा भर पर्ने अवस्था आइ नसकेको ले सुरक्षा को मापदंड अपनाउनु नै अहिले को आवश्यकता हो।
Sujaba Rana says:
Sayed huna sakxa mero Pani blood group O ho ,jaha ki ma dherai sankramit hune thau baideshik rojgar bibhag ma karyarat xu jaha madhes BATA aunu hune manxe haru sanga dherai Kam garnu parxa Tara Malai kunai simtom dekhako xaina.